China Imidazole rụpụta na Factory | Ugboro
CAS Mba: Nkesa
Ọdịdị: White crystalline ntụ ntụ
Ọcha (GC): ≥99%
UN 3263, Klas: 8, grouptù ngwugwu: III
Agent Na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ome osooso nke epoxy resins;
N'ime ụlọ ọrụ ọgwụ, ndị etiti maka API ndị ọzọ, dị ka Imazalil, Tioconazole, Bifonazole.
Raw Akụrụngwa pesticide dị mkpa maka synergist nke boric acid, nkwadebe nke ụmụ ahụhụ na nje.
☑ Imidazole bụ ezigbo ihe dị mkpa na etiti nke ezigbo ụlọ ọrụ kemịkalụ, nke nwere ọtụtụ ngwa. Imidazole abụghị naanị na purine amino acid nke ribonucleic acid na deoxyribonucleic acid, kamakwa na amino acid. N'otu oge ahụ, ọ bụ akụkụ nhazi dị irè nke ọtụtụ ọgwụ ahụhụ, ndị na-emechi enzyme, ọgwụ na ezigbo ọgwụ. Yabụ, imidazole na ihe ndị sitere na ya abụrụla ebe nyocha. Ebe ọ bụ na mgbanaka imidazole nke imidazole na ihe nrụpụta ya nwere mkpụrụ atọ nitrogen, nke enwere ike iji dị ka onye inyeaka elektrọn dị nro, imidazole bụkwa otu n'ime ndị ọrụ na-ejikarị arụ ọrụ na kemịkal kemịkal na-agbanwe.
Imidazole nwere ike iji dị ka ihe na-agwọ ọrịa nke resin epoxy, melite akụrụngwa nke ngwaahịa dịka ikwe, ịgbatị na mkpakọ, melite akụrụngwa eletriki nke mkpuchi na nguzogide kemịkal. A na-ejikwa ya na kọmputa na ngwa eletriki; a na-eji ya na mbadamba sekit ndị e biri ebi na ihe ndị dị na sekit dị ka ihe na-egbochi ọla kọpa; enwere ike iji ya na ngwaọrụ eletrọniki;
A na-eji ya dị ka ihe eji emepụta ọgwụ, dị ka ndị ọrụ antifungal, ndị ọrụ antifungal, ndị ọrụ hypoglycemic, plasma artificial, ndị ọrụ trichomonal, ndị na-arịa ụkwara ume ọkụ bronchial, ndị ọrụ mgbochi ọkụ, wdg; ọ na-eji dị ka pesticide ngwaọrụ, synergist nke boric acid elekọta mmadụ, nkwadebe nke pesticides na fungicides; na mgbakwunye, a na-ejikwa ya urea formaldehyde resin na-agwọ ọrịa gị n'ụlọnga, foto ọgwụ, adhesives, coatings, roba na-agwọ ọrịa mmadụ, mgbochi ọkụ ọkụ mmadụ, wdg Ọ bụ akụrụngwa nke electrostatic gị n'ụlọnga na organic njikọ etiti.
☑ Ihe karịrị 30 afọ mmepụta ahụmahụ;
☑ Ihe edenyere aha n'okpuru iwu EU-REACH;
Ngwaahịa nke ndị mba dị iche iche kwadoro n'ọtụtụ ụlọ ọrụ;
☑ Oge-Mbubata Oge: Oge izu 1.
Nke gara aga: Fluorobenzene
CAS 3003-25-2, CAS 453-18-9, (R) -3-Aminobutanol, 2-Methyl resorcinol, CAS 608-25-3, Amụma, C10-C14-tert-alkyl,